Paper Cup, Pepa Bhegi, Pepa Bhaketi - JAHOO
Welcome To Jiangxi Jahoo Pack
nerudo & kuzvipira
Jiangxi Jahoo Pack Co, Ltd. ndeimwe yevanotungamira vagadziri muChina, vanogadzira mhando dzakasiyana dzekudhinda nekurongedza zvigadzirwa, zvinosanganisira mapepa makapu, chikafu tora nzira pasuru, pepa pepa bhokisi, chipo bhokisi, pepa bhegi, kadhibhodhi ratidza kumira & bhokisi, katarogu, envelopu, nezvimwe. Isu tinopa imwechete-yekumira masevhisi kubva kune dhizaini, kugadzirwa kusvika pakuendesa.
Tine michina yakawanda yepamberi, senge 2 ROLAND michina, mana-mavara michina, UV anodhinda michina, otomatiki kufa-yekucheka michina, masimba ese kupeta mapepa emuchina uye otomatiki michina inosunga glue. Kambani yedu ine kuvimbika uye mhando manejimendi manejimendi masisitimu, enharaunda masisitimu uye anorema simbi kudzora masisitimu.
Isu tinoita nemutoro uye kutendeseka, tichigara tichiona zvinhu zvakanaka zvinoitwa kumiririra nyanzvi kambani yedu
Isu tinotora akateedzana ekuchenesa chirimwa kuve nechokwadi kuti zvigadzirwa zvinosangana nehutano pamwe nekuchengetedza zviyero.
kuraswa kraft bepa saladhi bhokisi, saladhi kupfeka ...
Disposable Kraft Pepa Chinese Noodle Bhokisi chikafu ...
Alaba single rukoko bepa mukombe
hombe chena kuraswa Wholesale kunwa biodeg ...
For anobvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya kwatiri uye isu tichava nekuonana mukati 24hours.